Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ivan Toney Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Ivan Toney Biography nke na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna (Lisa), Ezinụlọ, Smụnne, Ndị nne na nna ochie, na ndị ikwu na mba ọzọ. N'ikwu nke a, Ndụ Toney, Ndụ Onwe na Net Worth, wdg.
Na nkenke, Bio a nwere akụkọ zuru ezu nke ike dị ike, nwoke maara ihe ọ na-eche ihu na imeri ịjụ. Lifebogger gosipụtara akụkọ a site na mbido ya na Northampton, ruo oge ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka obi sie gị ike na ị ga-enwetarịrị gị akwụkwọ akụkọ ndụ mbụ ya na nke ọma. Le, nchikota nke ndu ndu Toney.
Ivan Toney Biography - Lee mmalite ndụ ya na Football na Success Gallary.
Ee, onye ọ bụla maara Toney dị ka onye na-aga n'ihu Predatory Forward onye nwere ikike dị ukwuu na mpaghara ikpe mmegide. Ndị na-agba ya nwere ọgụgụ isi na ha na-emepụta nsogbu maka ndị na-agbachitere ya.
N'agbanyeghị otuto ndị gbara aha ya gburugburu, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ otu akwụkwọ dị mkpirikpi nke Ivan Toney's Biography. Maka nke a, Lifebogger abịala ọrụ gị. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Ivan Toney Childhood Akụkọ:
Maka ndị bidoro akwụkwọ ndụ, ndị na - agba bọọlụ bekee na - aza aha niile - Ivan Benjamin Elijah Toney. A mụrụ ya na 16th ụbọchị nke ọnwa 1996 na nne ya, Lisa, na Northampton obodo dị na mpaghara East Midlands nke England. Lee ndị na-agba ọsọ na ezigbo enyi ya.
Zute otu nne na nna Ivan Toney - nne ya, Lisa.
A zụlitere Ivan Toney na ụmụnne ya nwanyị abụọ aha ya bụ Jemma na Jasmine. Ya na umu nne nne ya ndi ozo toro - site kwa na otu nne.
Nzụlite nke Striker sitere na nne ma ọ bụ nna naanị - nne ya bụ Lisa. Ọ bụrụ na ị maghị, Nna Ivan Toney anọghị na ndụ ya kemgbe ọ bụ nwata.
Dị nnọọ ka ndị agbata ụkwụ Switzerland (Breel Embolo na Kevin mbabu) gụnyere Kalvin Phillips, Nwa amaala Northampton ji oge ya kachasị mkpa n'oge ọ bụ nwata na mama ya.
Ezigbo ezinụlọ Ivan Toney:
Ebe ọ bụ na ndị mụrụ ya kewara ụzọ, ọ na-esiri nwatakịrị ahụ ike ịmatakwu ya. Ọ bụ ezie na Toney's Mum (Lisa) nọ ebe ahụ, mana enweghị Nna mere ihe efu na ya.
N’ezie, nwatakiri obula nke biri site na nbibi nke nne na nna ya ga-ama ihe ngbagha nke obi na ihe ojoo o nwere ike ibute.
Ivan Toney dị n'etiti ndị na-agba ụkwụ ole na ole (ịkpọ aha ole na ole), ihe ndị dị ka Hichapụ Ali, kpakpando gara aga na Chelsea; Dominic Solanke, na Renato Sanches - onye nwere ihe mgbu nke nkwụsị nke ndị nne na nna.
Ihe Ivan Toney's Mum (Lisa) gabigara:
O siri ike idebe obere ezinụlọ ya mgbe ọpụpụ nke nwoke ọ hụrụ n'anya. Dị nnọọ ka Melanie na Adolphine, (ndị nne nke Marcus Rashford na Romelu Lukaku), Lisa kwụsịrị nri iji hụ na nwa ya hụrụ nri ọ ga-eri.
O juru ya anya, o mere ka nwa ya ghara ịnọ ọtụtụ afọ - naanị ka Toney chọpụta n'oge na-adịbeghị anya. Mgbe ọ chọpụtara, ọ kwere nkwa ịkwụ mama ya ụgwọ maka àjà ahụ. Dị ka ya si kwuo;
Àjà Mama m chụrụ bụ ka m hụ na m na-eri nri oge niile.
Ọ hụrụ na m na-eme ihe ọma ma na-eru ebe m chọrọ.
Enweghị m ike ikele nne m maka ihe o meere m.
Naanị ile ya anya, ị nwere ike ịsị na Toney bụ n’ezie, nwoke siri ike. Ọ bụghị onye na-akụda mmụọ. N'ụzọ dị ịtụnanya, Baller dara mbà mgbe ọ chọpụtara ihe mama ya mere ya mgbe ọ bụ nwata.
N'ezie na enweghị obi abụọ, nchọpụta dị otú ahụ banyere ndị nne na nna (nke kachasị nne) ga-akpali nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị ọ bụla.
Inwe nna ohuru:
N’ebe ọzọ iji mezie ndụ ya, Lisa kpebiri ịlụ onye ọzọ. Ya na di ohuru ya (Ivan Toney's step Dad), amuuru umu nwoke abuo. N’ime mmekọrịta ezinụlọ, ụmụnne a bụ ụmụ nwanne ya nwoke.
Ivan Toney Ezinụlọ:
Ọtụtụ Fans maara na ya nwere English Nationality. Mgbe anyị mechara nyocha kpụ ọkụ n'ọnụ, anyị chọpụtakwara ihe gbasara mgbọrọgwụ ezinụlọ Ivan Toney nke esi na mba abụọ dị anya.
Ha gụnyere; Jamaica (site n'aka nne Ivan Toney) na Saint Vincent na Grenadines (site na papa Ivan Toney).
Maapụ a na-akọwa Ivan Toney Family Origin.
Site na agbụrụ, Ivan Toney bụ English-Jamaican. Brentford Superstar nwere ụdị ezinụlọ yiri ya na ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ na Europe. Ha gụnyere Michail Antonio, Isaac Hayden, Mason Holgate, Bobby Reid, Max Erọn, Nathan Redmond, na Raheem Sterling, wdg
Dabere na akụkọ NyeMeSport, ndị England na-emeghị ka ọ bụrụ ndị Jamaica nwere ike mejupụta otu egwuregwu iri na otu. Ndị egwuregwu Jamaica mbụ a nwere ike karịa ọtụtụ otu mba.
Inyere nne na nna ya ochie aka site na Nna ya:
Na Eprel 2021, mgbawa ugwu gbapụrụ 'ọnụ ọgụgụ mmadụ' nke Saint Vincent (ebe nna nna Ivan Toney si). O mere ka ndi mmadu nile ghara inwe mmiri ocha. N'ezie, a na-akpọ ugwu ahụ dị ka otu n'ime ihe kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme na St. Vincent.
N'agbanyeghi nkewa dị n'etiti ndị nne na nna Ivan Toney, onye England na-eti ihe anaghị ala azụ iji nye ndị ikwu papa ya na mba ahụ dum aka inye aka. Nzaghachi ya bịara ozugbo ọdachi ahụ mechara. Nwoke bụ!
Nke a bụ Ivan Toney ka ọ na-awụsa obi ya maka ụfọdụ ndị ezinụlọ ya na ụmụ amaala nke Saint Vincent na Grenadines.
Ivan Toney Mmụta na Ọrụ Nlekọta
Na mbido, ịgba bọọlụ ghọrọ ihe kacha mkpa. N'ezie, isi iyi nke Toney - pụọ n'ihe ndị na-eme na Northampton.
Gbaso nzọụkwụ nke otu ndị na-agba ọsọ n'ụwa kachasị ike (Adebayo Akinfenwa), Echiche Toney gụrụ akwụkwọ bụ ịga ụlọ akwụkwọ mmuta bọọlụ nke obodo ya.
N'ịbụ onye ọ joyụ nke mama ya (Lisa), onye na-eto eto ghọrọ onye na-eto eto ọkachamara na-anọchite anya Northampton Town. Toney mebiri ndekọ a n'oge ọ mere agadi nke mbụ ya n'oge 16 na afọ 2012.
Ivan Toney Biography - Ndụ Mbido na Ọkachamara Ngwá Ọrụ:
Oge atọ mbụ nke ọrụ agadi ya hụrụ ya ka ọ bụrụ onye na-atụrụ ndụ nke na-amaghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ịme ihe mgbaru ọsọ na iji bọl na-egosipụta aghụghọ dị ike. N'oge ahụ, ihe niile Toney rọrọ bụ - igwu egwu na Premier League.
N'ihe dị iche iche na-emecha n'ihu ihe mgbaru ọsọ - dịka a hụrụ na vidiyo dị n'okpuru, Ivan ghọrọ onye na-agba ọsọ na-agba egwu na Njikọ nke Abụọ. Nke a bụ England Football League Fourth Division.
Na November 2014, Star na-eto ngwa ngwa nwetara nnyefe ego na Wolverhampton Wanderers. N'ụzọ dị mwute, azụmahịa ahụ dara n'ihi na Toney nwere nsogbu ahụike a na-akọwaghị.
N'agbanyeghị ndakpọ olileanya ahụ, Toney ka nwere nchekwube maka ibuga nnukwu njem ọzọ. Ọ nwere olile anya maka ịfefe - ọbụlagodi karịa - nke Wolves nyere.
Ivan Toney Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N’ikpeazụ, atụmanya ndị dị n’ihu ghọrọ eziokwu. Ivan Toney bịanyere aka na Premier League - Newcastle United - na 6 August 2015 na nkwekọrịta ogologo oge.
Ivan Toney Newcastle ụbọchị.
N'ezie, na 2015/16 Magpies team nwere kpakpando ndị nwere ike imeri EPL. Ha gụnyere aha mmasị; Kevin mbabu, Papiss Cissé, Andros Townsend, Nnenna, Jamaal Lascelles, Tim Krul, Georginio Wijnaldum, Sam Ameobi, Aleksandar Mitrovic, na Florian Thauvin, wdg
Mgbaghara nke Newcastle:
N'oge ahụ Ivan Toney na ndị Magpies bịanyere aka n'akwụkwọ, ọ chere na ọ bụ ya mere ya. N'ezie, ọ chere na ọ B dreamR dream nnukwu nrọ ya nke ịbụ kpakpando na Premier League. N'ikwu nke a, nkwenye na trajectị ya ga-adị elu ruo mgbe ebighi ebi.
O di nwute, ihe ndia nile adighi ka ha bu eziokwu. Nke mbu, ndi enwetara ohuru Ọrịa ụlọ Newcastle merụrụ ọrịa ụlọ- Akụkọ BBC. N'ikwu okwu banyere ihe isi ike nke ịhapụ ezinụlọ ya mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Toney kwuru;
Ọ bụ nke mbụ m na-apụ n’ụlọ n’ụlọ m n’oge niile. Achọpụtara m na mama m anọghị ebe ahụ ịme m ihe niile.
Site na ndụmọdụ ndị nne na nna Ivan Toney, o mechara bụrụ nnukwu mmadụ. Toney malitere ịrụ ọrụ na ike anụ ahụ ya, ihe niile ọ dị mkpa iji mee iji merie asọmpi elu Bekee.
Na Newcastle, ọ chọpụtara na ohere ndị otu egwuregwu pere mpe. Ọzọkwa, Toney kwetara na uche ya ezighi ezi n'ihi na Newcastle weere ya dị ka akara aka dị ala. N'ezie, onye kwesiri inwe echiche pere mpe maka bọọlụ otu bọọlụ.
Na-emegbu site na mgbazinye ego:
Ivan Toney nwere mwute nke ịkwa ụta na ịjụ ya na Magpies ọ hụrụ n'anya. Dabere na DailyMail, ọ boro Steve McClaren ebubo na Rafa Benitez'Newcastle na-agbagha ya na mbinye ego.
Toney nwere nkụda mmụọ kwere nkwa ịbọ ọbọ, ya na nkwa na ya ga-alaghachi na Premier League iji gosipụta onwe ya.
N'oge a, Toney maara na ụbọchị ya na Newcastle agafeela. Nke a bụ mgbe ụlọ ọrụ ahụ mere ihe site n'ịchụpụ ya - ala. Ha zipụrụ Ivan Toney na mbinye ego, ọ bụghị na Championship (ọkwa dị n'okpuru EPL) kama na English League One club - Barnsley.
Ivan Toney Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Na Barnsley, Onye na-aga n'ihu malitere ịchọ ọrụ iji laghachi azụ. N'oge ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile nwere ike ịkọ na agụụ na-agụ Toney maka ihe ịga nke ọma. N'oge a, mkpebi siri ike na nkwenye onwe ya ghọrọ okwu nche ya kachasị mma.
Site na ebumnuche ya, Nwa nwoke nwere obi uto duziri Barnsley ka ọ merie bọọlụ bọọlụ bọọlụ yana egwuregwu-egwu.
Obi istọ bụ mgbe ịhapụ ụlọ ọgbakọ na-enweghị isi gị na ya wee gaa na ezinụlọ ọhụrụ iji nwee ọganiihu.
Mgbe Toney rụchara ọrụ izizi ya na Barnsley, Toney weghaara nkwupụta mgbazinye ego, nke mbụ ya na Shrewsbury Town, ma mesịa gaa Scunthorpe United na Wigan Athletic.
Mgbe na klọb ndị a, Rising Star nwetara ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ. Toney nyekwara otu n'ime klọb ndị ahụ (Wigan) aka inweta EFL League One - nnukwu mmụba maka CV ya.
N'ikpeazụ ịhapụ Newcastle:
Mgbe ọtụtụ ihe ịga nke ọma na Scunthorpe United, Toney kwuru na ọ ga-alaghachi Newcastle United - ụlọ ọrụ gbawara obi ya. Kama nke ahụ, o kwetara ịkwaga na Peterborough United.
Mana kama ịda mbà, Predatory Forward gara site n'ike ruo n'ike ya na ezinụlọ ọhụrụ ya. Ivan Toney ghọrọ onye obi ọjọọ n'ihu ihe mgbaru ọsọ. Onye n’agbụrụ bọọlụ egosighi emere ndị nche goolu ebere. Nke a bụ otu ihe ngosi vidiyo.
Toney mere nke ọma nke juru ìgwè mmadụ anya - ya na ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ ya, gụnyere okpu aghụghọ. Dị ka ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike ya, ndị na-aga n'ihu tozuru oke dị ka Player nke Oge na EFL Awards. Ndị a bụ ihe nrite ikpeazụ ọ meriri tupu COVID-19 eti.
Ivan Toney na Peterborough United na-enye onyinye.
Akụkọ Successga nke Ọma Brentford:
Mgbe njem ịga nke ọma na Peterborough United NA NA, na Big Dream nke na-ekwu okwu na Premier League, Toney kwetara ịkwaga Brentford.
N’ụlọ ọhụrụ ya, okwukwe dị ukwuu bịara. Toney mepụtara echiche siri ike na nkwenye na ya, ya na ndị otu ya, nwere ike ime ka Brentford gaa ọkwa nke Bekee.
Maka Toney, ọ bụ UGBU A ma ọ bụ Ọ BVERR to iru Premier League. Kemgbe ọ banyere Brentford, Ivan Toney eleghabeghị anya azụ. Site na mmali dị egwu na omume mkpebi siri ike, o meriri ihe mgbaru ọsọ 31 dị ịtụnanya - niile n'otu oge. Lee nchịkọta vidiyo nke arụmọrụ ya.
N'ihi ọtụtụ oge na Brentford, Toney setịpụrụ ihe ndekọ ọhụụ nke Championship maka ihe mgbaru ọsọ kachasị emetụ n'otu oge.
N'ezie, ọ mere nke ọma ihe mgbaru ọsọ 25 Ollie Watkins goolu maka klọb ahụ n'oge gara aga. Site na ebumnuche ndị ahụ na arụmọrụ dị egwu, Toney meriri EFL Championship Golden Boot na Brentford Supporters 'Player of the Year.
Ọ kwadoro Brentford niile.
Nke ka mkpa bụ na, ụlọ ọrụ EFL kachasị ewu ewu (dịka aha ya bụ aha ya) nyeere Brentford ọ hụrụ n'anya aka inweta mmeri na egwuregwu EFL Championship.
Lee mmemme nke oge Toney chere. N'ikpeazụ, ya, ya na ndị otu ọ hụrụ n'anya, mere ememme nkwalite ha nọ na-eche ogologo oge na Premier League.
A ga-ekwu eziokwu ebe a, ọjụjụ na ọrịre ọzọ nke Toney bụ otu n'ime mmejọ kachasị njọ nke Newcastle United mere.
Ọzọkwa, e mezuru nrọ ya nke ịghọ kpakpando na Premier League na ọnọdụ ya nwere ike ịdị elu ruo mgbe ebighị ebi.
Ka m na-ede ihe a Biography, Toney nọ n'etiti Fantasy Premier League-enyi na enyi na-emefu ego na ndị egwuregwu bọọlụ na-atụle maka ndị otu FPL 2021/2021.
Ire maka ịbọ ọbọ:
Mgbe Toney nyeere Brentford aka inweta nkwalite na Premier League, ọ gwara Sky Sports - ọ gaghị echere Mechie ndị mmadụ ọnụ.
Ugbu a, nnukwu ajụjụ bụ; Oneynye bụ Toney na-ezo aka? Ọ bụ ndị Fans Newcastle ma ọ bụ Rafa Benitez?… Ọfọn, naanị oge ga-agwa. Ihe ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, banyere Bio ya, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwunye Ivan Toney na Nwa ya:
Obi abụọ adịghị ya, ịnọ naanị na-enweghị ezinụlọ na onye ọlụlụ nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kachasị njọ na ndụ. Jụọ Striker na ọ ga-atụgharị uche ụbọchị Newcastle ya na gị. Ikekwe oge ndị enyi ya gwara ya;
nwoke, Biko Nweta enyi nwanyị !!
Dị ka otu akwụkwọ si kwuo, Ivan Toney nwere enyi nwanyị n'oge gara aga. Ọ bụ mmekọrịta dara ada, nke ọ na-anaghị ekpughere ndị mgbasa ozi. Yiri Erling Haaland, ndụ ya gara n'ihu, ya mere nwa agbọghọ ya.
Gbaghara ọnọdụ ahụ ma gaa n'ihu, Ivan zutere nwunye ya nke ghọrọ onye ahọrọ. Nwanyị a kara aka ịbụ nne nke ụmụ ya. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Katie Toney. Ma ndị hụrụ ya n'anya (ndị nọ n'okpuru ebe a) bụ nne na nna nye nwa nwoke mara mma ha kpọrọ Ivan Toney Jr.
Zute nwunye Ivan Toney na Nwa ya (Junior).
A mụrụ nwa Katie na Ivan Toney (Junior) na 17th nke August 2019 - n'oge nna ya meriri ihe mgbaru ọsọ 40 maka Peterborough United. Ọbịbịa ya pụtara ọtụtụ ihe maka Toney, ka o mere ka ụwa ya zue ezu.
Nwa Ivan Toney - Ugbua ama ama:
N'agbanyeghi na o ruru ulo akwukwo, nwa Kate na nwa Toney (Junior) amalitela iru oru ya ka o buru onye amara - dika nna ya a ma ama.
Nwa nwoke ahụ na papa ya na-achịkwa akaụntụ Instagram ya nke na-agụ ọtụtụ narị ndị na - eso ụzọ ya - ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na - akwado ndị mụrụ ya.
Oke osimiri dị nso maka Junior. Ọ ga-abụrịrị onye a ma ama dị ka papa ya a ma ama.
Site na ihe o yiri, Katie na Toney anaghị echere Junior ka ọ bụrụ nwoke ga-eme ka ọ dị ukwuu; ha na-eme ka ọ dị ukwuu dị ka nwata. Lifebogger nwere olile anya na Baby Ivan na-agbaso nzọụkwụ papa ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ.
Ndụ Ivan Toney nke Onwe:
Anyị chọpụtara ihe atọ ga-eme ka ị ghọta England-Jamaica Striker. Nke mbu, obu uche ya nke ndu. Toney bu nwoke obi tara mmiri, onye anaghi emetu obi - na ihe o bula ndu dakwasiri ya.
Nke abuo, usoro mgbatị nke Ivan Toney na-enye gị echiche banyere otu o si enweta ike ya, ike ya, yana oke egwu ya nke ọma.
Ndụ Ivan Toney nke Onwe - kọwara.
Nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ eziokwu na ọ bụ nwoke zuru oke - onye hụrụ nwunye ya n'anya, Katie (nwanyi nke onwe) nakwa nwa ya. Vidio a na-akọwa nnukwu mmekọrịta nna na nwa.
Ndụ Ivan Toney:
Onye na-eti Bekee abụghị ụdị onye na-anya isi ma ọ bụ onye na-eji mgbasa ozi ya na-ekwu okwu afọ ojuju banyere akụnụba ya.
N'agbanyeghị na ọ bụ ọgwụgwọ iji gosipụta ibi ndụ mara mma, Toney anaghị ezere ịnwe ụgbọ ala kachasị amasị ya (Mercedes G Wagon) maka onwe ya na ezinụlọ ya. Ma papa ma nwa ha nwoke zuru oke nke oma - ma di njikere - maka ịpụ.
Ivan Toney na Nwa - na-ele anya ha niile maka ọpụpụ.
Ndụ Ivan Toney Ezinụlọ:
N'ezie, ọ bụ naanị karịa ndị na-agba ọsọ na-atụle ihe mgbaru ọsọ maka ntụrụndụ. Ivan Toney bụ nwoke ezinụlọ nwere ezigbo mmasị na ndị ikwu ya ma ọ bụghị naanị mama ya, nwunye ya na nwa ya (dị ka anyị si mara). N'ebe a, anyị ga-enye gị ihe akaebe banyere nke ahụ.
Ivan Toney ikwu, sị:
Ha bụ ndị nyeere ya aka ịghọta ụzọ ndụ mpaghara Caribbean karịa. Ndị ikwu Ivan Toney mere ka ọ bịarukwuo ezinụlọ ya nso na Georgetown, ọchịchị dị na Saint Vincent na Grenadines. Obodo a (n'okpuru) bụ ebe e liri nne na nna ya ochie.
Ivan Toney na onye ikwu ya.
Maka onye Bekee-Jamician na-aga n'ihu, ịga mba ndị mụrụ ya na-eweta ohere ahụ magburu onwe ya ịmụ asụsụ ọhụrụ ndị ọ na-atụfughị ​​n'oge nwata. Ọ ka nwere ọtụtụ ndị enyi na Jamaica na Saint Vincent.
Ivan Toney Nne:
Ọbụna ruo ụbọchị, Lisa ka nwere mmasị ilekọta nwa ya nwoke nke ọma. Ọ na-ejide n'aka na ọ na - enweta ihe kachasị mma n'onwe ya.
Ebe ọ bụ na mmechuihu nke Newcastle, Lisa nọgidere na-akpachara anya n'okwu metụtara nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya. Toney gwara SunSport banyere mama ya;
Ọ na-ezitere m ozi mgbe egwuregwu gasịrị, na-asị, 'Biko ekwela ka ha mesie gị ike, ekwela ka ha banye n'isi gị'.
Nke a bụ n'ihi na mama m maara na m nwere ike isi na-ekpo ọkụ mgbe ụfọdụ.
Ọzọkwa ọ na-agwa m mgbe niile, 'Bụrụ onye na-eme ihe ike dị egwu, m na-emekwa ihe ziri ezi.'
Eziokwu bụ, ọbụlagodi na Toney gụrụ ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ na ọ bụghị, mama ya ka ga-ezigara ya - niile na aha nke ikwenye na ihe niile dị mma. Kemgbe ọ bụ nwata, Lisa na-echegbu onwe ya oge ọ bụla nwa ya nwoke na ndị enyi ya gwụrụ.
Ivan Toney Nwanne nwoke:
Ọ bụ ezie na obere akwụkwọ dị na ya, anyị maara na ọ bụ nwoke nyere (Lisa) ohere ịnweta ndụ ka mma mgbe di ya hapụrụ ya. Otu, nne Ivan Toney na StepDad ya bụ nne na nna nke ụmụnne ya.
Vanmụnne Ivan Toney:
Site na ihe anyị chịkọtara, ndị bọọlụ bekee nwere ụmụnne nwanyị abụọ (sitere na nne na nna ya) na ụmụnne abụọ nne (site na nne ya na StepDad).
Eziokwu Ivan Toney:
N'ịkọkọ akụkọ ndụ ya, anyị ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara igwe ihe mgbaru ọsọ Brentford. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Eziokwu nke 1: Ihe nke Ivan Toney Tattoo:
Otu njirimara pụrụ iche nke Brentford na-aga n'ihu bụ nka ya. Ogbugbu na-ekwu okwu banyere ndụ ya na akụkọ egwuregwu football na-ekpuchi ahụ Ivan Toney. Ka anyị gwa gị ihe gbasara egbugbu bọọlụ bọọlụ.
Ivan Toney Tattoos. Kọwara.
Nke mbu, enwere nwa pusi n'ile anya n'ime ọdọ mmiri doro anya. Kama ịnwe echiche, nwa pusi ahụ hụrụ agu na-eleghachi anya ya na mmiri. Ivan Toney kọwara ihe egbugbu ahụ pụtara site n'ikwu;
Nke ahụ bụ otú m si ahụ onwe m mgbe m lere anya n’enyo.
N'ezie, ọ dị mkpa naanị etu m si hụ onwe m na ọ bụghị etu ndị ọzọ si ahụ m.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ No17 - nọmba uwe elu ya kachasị dị oké ọnụ ahịa. Nọmba ahụ dị na azụ uwe elu Ivan kemgbe ahụ. Nke a bụ ihe nyere ya nnukwu ihu ọma n'inwe ihe mgbaru ọsọ. N'ihi nke a, Onye na-aga n'ihu na-edebe ya dị ka egbugbu.
Eziokwu nke 2: Udo maka nne na nna ochie Ivan Toney:
Ivan Toney na-enyefe ndị nne na nna ya ochie ihe mgbaru ọsọ ya niile na Peterborough. N’ụzọ dị mwute, nne nna ya na nne nne ya nwụrụ n’ime obere oge.
Tupu ha anwụọ, ndị egwuregwu bọọlụ England nọ nso nne nne ya. Dị ka ụzọ isi sọpụrụ ya, Toney mere egbugbu ha abụọ n'oge ọ bụ nwata.
Ogbugbu nke Ivan Toney na nne nne ya.
N'oge a na-ede Ivan Toney's Biography, ọ na-ezube igbu egbugbu ọzọ. Oge a, ọ bụ otu nwere akara (31) na Golden Boot n’akụkụ ya. Okike a ga-egosipụta nsọpụrụ nke oge mbụ ya na Brentford.
Naanị onye ga-egbochi ya igbu egbugbu ahụ bụ nne ya. Ọ dị mkpa ịmara na nne Ivan Toney (Lisa) achọghị ka nwa ya tinyekwuo egbugbu n'ahụ ya karịa ka o nwere.
Eziokwu nke 3: Na-atụle Ivan Toney's Salary na nke nkezi Jamaican:
N'ebe a, anyị ga-atụle ụgwọ ọrụ ya na nke nwa amaala mba Caribbean. Ndi Jamaica nke na-enweta 96,400 JMD kwa ọnwa ga-achọ afọ 75 iji mee Ivan Toney kwa ọnwa na Brentford.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Ivan Toney's Bio, nke a bụ ihe o nwetara na Brentford.
IVAN TONEY SALARY BREAKDOWN (2021) - Na Dollar Jamaica JMD $.
Kwa Afọ: JMD $ 378,927,257
Ọnwa kwa: JMD $ 31,577,271
Kwa Izu: JMD $ 7,275,869
Kwa :bọchị: JMD $ 1,039,409
Kwa elekere: JMD $ 43,308
Nkeji nkeji: JMD $ 721
Sekọnd ọ bụla: JMD $ 12
Eziokwu # 4: Abụ Na-abụghị Enyi na Enyi:
Ebe ọ bụ na ọ chọghị abụ Peterborough United fans mere maka ya, Ivan Toney nyere ndị na-akwado klọb otu oge iwu ka ha gbanwee okwu nke abụ ha iji mee ka ọ nwekwuo mmekọrịta ezinụlọ.
Abụ Ivan Toney na-agụnye akara gbasara oke nke PE * IS ma ọ bụ gen * tal. Ọ dị ka otu Man United fans na-abụ abụ maka Ex-striker Romelu Lukaku na 2017. Gụkwuo na BBC.
Ukwe a kara akara dị ka mmejọ nwere abụ ndị a;
"Ivan Toney, Ivan Toney, Ọ kpọrọ ndị Cobblers asị, Ọ kpọrọ Cambridge asị, nke ya bụ f ** k ** g oke!"
Nke a bụ vidiyo nke Chavan Ivan Toney - nke ndị egwuregwu bọọlụ na-akpọ asị.
Eziokwu # 5: Ọ kwụrụ na ikpere:
Mgbe ọ nọ na Brentford, Toney nyere aka n'ime ka klọb ya kwụsị ikpere megide ịkpa ókè agbụrụ.
N'ajụjụ ọnụ, onye egwu kwuru na ndị ịgba bọọlụ nọ "eji dị ka pupp”Ime mmegharị nke ọha mmadụ n’onwe ya na-enweghị ike ịgbanwe.
Eziokwu # 6: Football Profaịlụ:
N'agbanyeghị na ọ bụ onye nkuzi ma ọ bụ Fox na Box (yiri Dominic Calvert-Lewin), Toney bụ otu n'ime ndị na-ata ahụhụ site na ọkwa FIFA dara ogbenye. Lee ya hilarious Low overalls maka 2021. N'ezie, FIFA kwesịrị ime ihe.
Eziokwu nke 5: Ivan Toney Okpukpe:
Lisa zụlitere nwa ya nwoke dị ka ezigbo Onye Kraịst. N'ezie, ọ na-echetara Toney ka o kpee ekpere ya tupu egwuregwu ọ bụla. Dị ka ụzọ nke okwukwe ya (ọ bụ ụtụ nye nne na nna ya ochie), Igwe kpakpando nke England na-etolite omume nke igosi aka ya na mbara igwe mgbe ọ gụrụ.
Okpukpe Ivan Toney - kọwara.
Tebụl dị n'okpuru na-ekpughe nkenke banyere ozi gbasara Ivan Toney. Ọ na - enyere gị aka ịfefe na profaịlụ ya nke Wiki na-enweghị nnukwu nsogbu.
Aha zuru ezu: Ivan Benjamin Elijah Toney
Ụbọchị ọmụmụ: 16 nke Mach 1996
Age: 25 afọ na ọnwa 6.
Ebe amụrụ onye: Northampton, England
Mba nna: Saint Vincent na Grenadines
Nationality nke mama: Jamaica
Ndị nne na nna: Lisa Toney (Nne)
Ụmụnne: Jemma na Jasmine (ụmụnne nwanyị) na Half Brothers
elu: 5 ụkwụ 10 sentimita asatọ OR 1.79 mita
Ezigbo Net: 4 nde Euro (2021 stats)
Ihe akara Zodiac: Pisces
Onye nnọchite anya: Ndị ndụmọdụ Pinnacle Global LLP
Egwuregwu Ọnọdụ: Gafere n'ihu
Ọ bụ bọọlụ bekee na - esote - dịka afọ 2021. Toney - n’ịchụso ịdị ukwuu ọ hụla ihe mkpọbi ụkwụ.
Nke ahụ emerighị ya, kama nke ahụ, wusiri anụ ọhịa ahụ dị n'ime ya ike. N'ịbụ onye Rafa Benitez gbawara na Newcastle, o kwere nkwa igosi na ndị nwere obi abụọ adịghị mma.
Biography nke Ivan Toney na-echetara anyị na “You nwere ike ịga nke ọma naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nke ọma dịka ịchọrọ iku ume". Mgbe ọ dị afọ 25, a na-atụle ya a Late Bloomer - dị ka ndị ikom a; Martin Braithwaite, Di Natale, Jago Aspas, Vardy, Papuan Gomez, na Dani Parejo.
N'ikpeazụ, ọ dị ndụ Lifebogger ka o nwee ekele maka nne Ivan Toney (Lisa). Enweghị ajụjụ, enweghị ịhụnanya karịrị nke ya na enweghị ịchụ àjà ma e jiri ya tụnyere nke o nyere.
Toney kwenyere na mbọ nke nne ya na ya onwe ya na-enwekwa obi ụtọ na nwa ya nwoke nwere nnukwu goolu.
Ezigbo onye na-agụ akwụkwọ a ma ama, Lifebogger na-ekwu Daalụ maka iwepụta oge gị ka ị gbadaa ụdị akwụkwọ ndụ Ivan Toney. Anyị na-eche banyere izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ mgbe anyị na-ewepụta akụkọ ndụ ndị a dị ịtụnanya Ndị na-agba bọọlụ bekee.
Jiri obiọma kwuo okwu ịkọrọ gị echiche gị banyere ndị ịgba egwu bọọlụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla edeghị nke ọma na Biography nke Toney.